လင်းယံခ: အသည်းကွဲခြင်းကို ပြန်လည်ကုစားပေးနိုင်မယ့် အချက် (၃) ချက်
သတင်း၊ မီဒီယာ၊ စာပေ၊ သီချင်း၊ ဗဟုသုတများစွာ တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ အနုပညာရပ်ဝန်း Entertainment Blog!
Member ဝင်ပြီး အားပေးကြပါနော်....
အသည်းကွဲခြင်းကို ပြန်လည်ကုစားပေးနိုင်မယ့် အချက် (၃) ချက်
ပိုစ့်တင်သူက >> Linn Yan Kha at 3:06 PM
အသည်းကွဲရောဂါကို ခံစားဖူးတဲ့ လူတိုင်းဟာ အဲ့ဒီလို ခံစားနေရချိန်ကို ငရဲလို့ တင်စားလေ့ရှိကြပါတယ်။ မအိပ်နိုင်၊ မစားနိုင်၊ ဘယ်မှ မသွားချင်မလာချင် ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထ ရှိကြပေမယ့် ဒီရောဂါကို ပျောက်ကင်းအောင် ကုသဖို့ဆိုတာမျိုးကိုတော့ သူတို့သေချာမသိကြပါဘူး။
အချိန်က ကုစားသွားမယ်ဆိုတာမျိုးက မှန်ပေမယ့် အဲ့ဒီအချိန်တွေကုန်အောင် ဘယ်လိုဖြတ်ကျော်မလဲဆိုတာက အရေးကြီးနေပြန်ပါရော။ အဲ့ဒီတော့ ရောဂါကို ခံစားရတာ မှန်ပေမယ့် သက်သက်သာသာလေးနဲ့ ဖြတ်ကျော်သွားနိုင်မယ့် နည်းလမ်း (၃) ခုကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
၁။ အလုပ်အပြင် ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေ ပရဟိတလုပ်ငန်းလေးတွေ လုပ်ပေးပါ။ မိဘမဲ့ကလေးတွေဆီ သွားပေးတာမျိုး၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ သွားပြီးကူညီပေးတာမျိုး၊ တိရိစ္ဆာန်ထိန်းသိမ်းရေး စင်တာတွေမှာ သွားကူညီတာမျိုး စသဖြင့် ကိုယ်နဲ့နီးစပ်ရာအသိုင်းအ၀ိုင်းကို အကူအညီတောင်းပြီး ပရဟိတလုပ်ငန်းတွေ လုပ်ကိုင်ပေးပါ။ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်လည်း စိတ်ချမ်းမြေ့နိုင်သလို ခံစားနေရတာတွေကိုလည်း အထိုက်အလျောက် သက်သာစေမှာပါ။ အချိန်ကို အကျိုးရှိစွာ အသုံးချနည်းတစ်မျိုးပဲပေါ့။
၂။လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပေးပါ။ မနက်ဖြစ်ဖြစ်၊ ညနေ ကျောင်း၊ ဒါမှမဟုတ် အလုပ်ပြီးတဲ့အချိန်တွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု တစ်ခုခုလုပ်ပါ။ အားကစားလုပ်ခြင်းဟာ စိတ်ကို တည်ငြိမ်စေတဲ့အပြင် ညဘက် ကောင်းကောင်းအိပ်ပျော်စေနိုင်တဲ့အတွက် အသည်းကွဲနေလို့ ညဘက်အိပ်မပျော်တာမျိုးတွေ မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့။
၃။အိမ်ထဲ အောင်းမနေဘဲ အပြင်သွားပါ။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ တွေ့တာမျိုး၊ ဆွေမျိုးတွေဆီ သွားလည်တာမျိုးတွေအတွက် အချိန်ပေးလိုက်ပါ။ အဲ့ဒီလိုမှ မလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့ တစ်ယောက်တည်း လေကောင်းလေသန့် ထွက်ရှုတာမျိုး လုပ်ပေးဖို့ လိုပါတယ်။ အခန်းအောင်းပြီး တစ်ယောက်တည်းနေခြင်းက စိတ်ကျရောဂါ ဖြစ်နိုင်တာကြောင့်ပါ။
Android သမားများအတွက် လင်းယံခ V2.0 apk လေးပါ။ အောက်မှာ ဒေါင်းနိုင်ပါတယ်ဗျာ...
ကြိုက်ရင် like နှိပ်ခဲ့ပါနော်...
Android သမားများအတွက် ကိုးန၀င်း apk
သီချင်း အလန်းစားတွေကို ဖန်တီးဖို့ FL Studio 10
MECTEL 800MHz Internet Setting
တစ်ချိန်တုန်းက မြကျွန်းညို (သို့) တက္ကသိုလ်သီချင်းများ
ဝိုင် အကြောင်း ဗဟုသုတ
သင်လက်ထပ်ယူမယ့် မိန်းမအကြောင်း နှင့် သင့်အိမ်ထောင်ရေးကံကြမ္မာ
MM Hub မေတ္တာပို့ apk
27th SEA Games
Love Bay Din
ODE ON A GRECIAN URN (John Keats)
၁၃၇၅ခု အတာသင်္ကြန် ဆုမွန်လွှာ
Viber for PC (Ebook)
ကိုယ့်အချစ်ရေးကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေဖို့ အထောက်အကူ...
စိတ်ဖိစီးမှု ပိုမိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အချက်(၆)ချက်
အမျိုးသားတွေ နားမလည်နိုင်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေနဲ့ ပတ်သ...
ကိုယ့်လက်ကိုင်ဖုန်းကို ကိုယ့်ရည်းစားထက်တောင် ပိုခင...
သင့်ဘ၀အတွက် ပျော်ရွှင်မှု ရရှိစေမယ့် သိမှတ်ဖွယ်ရာမျာ...
ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးတွေမှာ ရည်းစားမထားပဲ တစ်ယောက်တည်...
တွဲလာတာကြာပြီဖြစ်တဲ့ ချစ်သူစုံတွဲတွေကို မမေးသင့်တဲ...
အသည်းကွဲခြင်းကို ပြန်လည်ကုစားပေးနိုင်မယ့် အချက် (၃...
မိဘတွေက ကျပ်လွန်း၊ ချုပ်လွန်းတာခံနေရတဲ့ ကောင်မလေးရ...
ရည်းစားဟောင်းက ကိုယ့်ဆီပြန်လာဖို့ ကြိုးစားနေသလား
ကမ္ဘာ့အမြန်ဆုံး အင်တာနက်မြန်နှုန်း ဗြိတိန်မှာရပြီ
နှစ်ဦးသား ရှေ့ဆက်သွားဖို့ ပိုမိုသေချာသွားစေတဲ့ အခ...
USB Stick နေရာကို အစားထိုးဝင်ရောက်လာမယ့် “ဒေတာကပ်ခ...
၂၀၁၄-ခု ၊ ဧပြီလအတွက် ကံကြမ္မာဟောစာတမ်း
Copyright © December 15,2011. လင်းယံခ | All Right Reserved. Contact as - Phone (+95-9) 2560 30230. , Facebook- Linn Yan Kha , E-mail - linnyankha@gmail.com